ब्यानर न्यूज Archives - E mechi
May232019 by emechiNo Comments
Posted in ब्यानर न्यूज, स्थानिय समाचार
झापा । जेठ ३ गते देखि देस व्यापी रुपमा प्रदर्शनमा आएको नेपालि कथानक चलचित्र जात्रै जात्राको युनिट चलचित्र पर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्व आएको छ । पूर्व आए संगै झापाको विर्तामोडमा रहेको क्यूएफएक्स चलचित्रका कलाकारहरुले दर्शक संगै बसेर केहिवेर चलचित्र हेरेका थिए । चलचित्रका कलाकर्मीहरुले दर्शकको प्रतिकृया समेत लिएका थिए । जेठ ३ गते देखि प्रदर्शन आएको चलचित्र जात्रै जात्राले तिन करोड बढि रकम उठाउन सफल भएको निर्देशक प्रदिप भट्टराईले बताए । हास्य कथामा आधारित चलचित्रमा विपिन कार्की, रविन्द्र झा, विन्द्र सिंह बाँनिया, दयाहाङ राई, वर्षा राउत, प्रकास घिमिरे, राजाराम पौडेल लगायतले मुख्य भुमिकामा रहेका छन् । उक्त चलचित्र पूर्वको विर्तामोडमा रहेको क्यूएफएक्स र कृष्ण चित्र मन्दिरमा राम्रो व्यापार गरिरहेको हल संचालक मिजास पोख्रेलले बताए ।
May172019 by emechiNo Comments
विराटनगर – प्रदेश १ का एकजना कम्युनिस्ट मन्त्रीले आफैले बनाएको कार्यविधिलाई मिचेर ‘खाजा घर’को उद्घाटन गरेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बिहीबार विराटनगरमा ‘खाजा घर’को उद्घाटन गरेपछि आलोचना भएको हो । मन्त्रालयमा कामकाज नभएपछि मन्त्री घिमिरे झिनामसिना कार्यक्रमको उद्घाटन र रिबन काट्न हिँड्ने गरेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री घिमिरेले केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रालयबाहेकको कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेका थिए । सरस्वती ओझा र निलम ढुंगेलले विराटनगरको सात घुम्तीमा सञ्चालन गरेको ‘लाफिङ खाजा घर’ को मन्त्री घिमिरेले चम्चाले बेलुन फुटाएर उद्घाटन गरेका छन् । खाजा घर उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मी पनि सहभागी थिइन् । घिमिरेले मन्त्री पदको गरिमा बचाउन नसकेको भनेर बिरोध भइरहेको छ । नेकपाका नेताहरूले पनि मन्त्री घिमिरेको आलोचना गरिरहेका छन् । म
काठमाडौं । २०१८ मा रिलिजमा आएको फिल्म ‘वीरे दि वेडिङ’मा अभिनेत्री स्वारा भास्करले एक हस्तमैथुन सिन दिएकी थिइन्, जसको कारण उनी निकै ट्रोलको शिकार भएकी थिइन् । लामो समयसम्मको ट्रोलपछि केही साम्य भएको थियो, पुनः ट्रोलर्सले स्वारा भास्करको उही सिनलाई निशाना बनाएका छन् । मुम्बईमा लोकसभा चुनाबको दौरान युवक÷युवतीले अरुलाई भोट हाल्नका लागि प्रेरित गर्न बेग्लै प्रकारको उपाय अपनाएका छन् । जहाँ शाहरुख खान, सलमान खान, करिना कपूर, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, ऋतिक रोशन र पूरै बच्चन परिवार भोट हाल्नका लागि बाहिर निस्किए, सोही समयमा ती युवक÷युवतीले स्वारा भास्करको ट्रोल गरे । उनीहरुले हातमा सिरानी लिएर सडकमा निस्किए, जहाँ एक म्यासेज पनि लेखिएको थियो । उक्त म्यासेजमा लेखिएको थियो, ‘यस पटकको चुनावमा स्वारा भास्करले जस्तो नगर्नुहोस् । आफ्नो औंलालाई सोचेर समझदारी तरिकाले भोट हाल्नुहोस्
कैलाली : दिनेश अधिकारीको रचनामा तारादेवीले गाएको एउटा नेपाली गीत छ ’सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखे जस्तो हुन्न जीवन!’ हो गीतमा भनिए जस्तै मानिसको जीवन न त सोचे जस्तो हुन्छ न सम्झे जस्तोनै। कैलालीको लम्कीका भीमराज भण्डारीलाई पनि नियतीले अहिले यस्तै गराईदिएको छ। जीवन यात्रामा भेटिएकी सुनिता रावललाई विवाह गरेर ल्याएको आउँदो असारमा ठिक तीन वर्ष पुग्दै थियो। लामो सयम देखिको प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक जीवनमा परिणत गरेको यो जोडी सिन्दुर हाल्न नपाउँदै सदाका लागि छुट्टिएको छ । सुनिताको सिउँदोमा एक चिम्टि सिन्दुर हाल्ने समय कुर्दाकुर्दै भीमबाट दैवले सुनितालाई कहिले नभेटिने गरी चुडेर लगेको छ । मंगलबार पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत कैलालीको लम्कीमा बिहान क्याम्पसबाट फर्किदै गर्दा २२ वर्षीया सुनिता लाई ट्रकले ठक्कर दिदा उनको घटना स्थलमै ज्यान गएको छ। चार
भिडियोमा हेर्नुहोस काठमाडौंमा हावाहुरीसहित भिषण वर्षा
काठमाडौं, १८ बैशाख । काठमाडौंमा हावाहुरीसहित पानी परिरहेको छ । साँझपख अचानक मौसम बद्ली भएसँगै हावाहुरी र पानी पर्न शुरु गरेको हो । हावाहुरी र पानीका कारण साँझपख ब्यापार व्यवसाय गर्न र किनमेलका लागि हिँडेका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । दिनभर मौसम सफा भएपनि बेलुकीपख बद्ली भएर हावाहुरीसहित पानी परेको हो । हावाहुरीका कारण काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको आशंका गरिएपनि विवरण आइसकेको छैन । काठमाडौंकै पनि केही ठाउँमा अलि धेरै र केही ठाउँमा छिटफुट मात्रै पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
नेपाल भित्रिँदैछ बंगालको खाडीबाट चक्रबात, हावाहुरी आउन सक्ने
काठमाडौं । बंगालको खाडीको दक्षिण पूर्वी भागमा भएको शक्तिशाली चक्राबात फानीका कारण शुक्रवारपछि पूर्वी नेपालका केही स्थानमा हावाहुरी आउन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । ‘नेपाल वेदर फ्रोकास्ट’ले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्दै बंगालको खाडीबाट शुरू भएको फानी शुक्रवारपछि पूर्वी भारतको ओडिसा हुँदै नेपालमा मोडिने र शुक्रवार मध्याह्नपछि नेपालका पूर्वी भागमा सामान्य असर गर्ने सम्भावना रहेको जनाएको हो । ‘उक्त चक्राबात नेपाल आउने सम्भावना अहिलेसम्म नदेखिएपनि नेपालको पूर्वी र मध्य हिमाली भागमा भारी हिमपात तथा प्रि–मनसुन भएकाले पूर्वी र मध्यका स्थानमा हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले सतर्क रहनुपर्ने देखिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । फानी शुक्रवार नेपालको पूर्व नजिकैबाट उत्तरपूर्व जाने भएकाले कमजोर बन्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
रिनालाई बेलुका होटलमा भेटेर सँगै चिसो खाने अपरिचित २ युवा को थिए ?
पथरी । मोरङ पथरीशनिश्चरे १ मा गत शनिबार बिहान नग्न अबस्थामा मृत भेटिएकी रिना बस्नेत (रुपा) को मृत्युको बिषयलाई लिएर प्रहरीले उनकै २ जना साथीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । शुक्रबार बेलुका ५ बजेको समयमा पथरीमा आएका २ जना अपरिचित युवाहरु सँग रिनाको भेट गराउने उनका २ जना मिल्ने साथीले भेट गराई चिसो समेत पिएर छुटेको कुरा सार्बजनिक भएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई सोधपुछका लागी नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार मात्र त्यहि मध्येकी एक साथीको मोबाईल समेत हराएको भनिएपछि घटना थप शंकास्पद बनेको छ । ती युवा को थिए ? उनीहरुको भेट किन गराईयो ? भन्ने बिषय थप शंका उत्पन्न गराएको छ । रिनाका ति दुबैजना मिल्ने साथी होटल सञ्चालक हुन । यसैबिच प्रहरीले रिनाको शव ईटहरीस्थित बुढीखोलामा शुक्रबार अत्येष्टि गर्ने तयारी गरेसँगै कविता पराजुलीको संयोजकत्वमा बनेको संघर्ष समितिले उनको शव पथरीमा ल्याई अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने ब
काँकडभिट्टा झापा : टाइब्रेकरमा भाग्यमानी सावित हुँदै आयोजक काँकडभिटा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर चौथो मेची नेत्रालय मेचीनगर गोल्डकपको क्वाटरफाइनल प्रवेश गरेको छ। बिहीबार भएको उद्धघाटन खेलमा पाहुना टोली क्यामरुनको दाफिन्स फुटबल क्लब ४-२ गोल अन्तरले पराजित बनेको हो। काँकडभिटाको जितमा निरज बस्नेत, पुजन उपरकोटी, बिकास राई, निशान लिम्बूले गोल गरेका थिए। योगेश गुरुङको प्रहार दाउफिन्सका गोलरक्षक प्रिसो जाङगाले बचाएका थिए। दाउफिन्सको तर्फबाट गोल किपर प्रिसो र विक विकको प्रहार मात्र गोलमा परिणत भएको थियो। शिलो मार्टिन र पेटेङगाको प्रहार बाहिरिएपछि दाउफिन्सको यात्रा प्रि–क्वाटरबाट समाप्त भएको हो। खेलको सुरुवाती अग्रता दाफिन्सले लिएको थियो। छैटौँ मिनेटमा ओगेन जुनियरले गोल गरेका थिए। मेसुकेको शसक्त प्रहार आयोजक काँकडभिटा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरका गोलकिपर किशोर गिरीले पञ्च गरेर फर्काएपछि पाएको अवसरलाई जुनि